Rakibolana malagasy sy Rakipahalalana momba an' i Madagasikara : rabarisonkapilavoahitsaka
Teny iditra Rabarison: Kapila voahitsaka
Raha mihazo ilay arabe atao hoe " Rue Amiral Pierre " ianao any Antananarivo, ka lasa ambanimbany, tojo ilay trano misy soratra hoe: "Coiffure pour Dames", eo andrefan'io jereo fa misy lalankely maizimaizina. Midina ny tohatohabato, araho iny elakela-trano iny, ka rehefa misampan-droa ilay lalana, dia ny havanana aleha; vao afaka intelo mandingana, ianao, dia io no tranon-dRasoazanaparany, nenitoan'i Henri-Aimé antsoiny hoe " Mama ", fa Ramatoa Rahanta reniny kosa ataony hoe "Neny" . Antonintoniny ny trano; efa ela nitoerana, nefa voakajakaja ka mbola tsara jerena. Eo atsimon-trano, misy tohatra azo iakarana any ambony rihana. Io efitrano malalaka ao ambony rihana io, voatemitra sy vita ngorodona, no ipetrahan'Andriamatoa Henri, efa hatry ny fito taona izay.